Barreeffamni maqaa kiyyaan marsaa Siitube gubbatti Jawaar Muhammad irratti barrefame akka barreefama kiyya hinta’in akka naaf hubattan galatooma. – Welcome to bilisummaa
Barreeffamni maqaa kiyyaan marsaa Siitube gubbatti Jawaar Muhammad irratti barrefame akka barreefama kiyya hinta’in akka naaf hubattan galatooma.
bilisummaa March 17, 2016	1 Comment
By Umar Suleyman
Duraan dursee kabajamtoota jaalattoota tiyya,dhageeffattoota tiyyaaf, deeggartoota tiyya akkasumas,hordoftoota tiyya, ilmaan Oromoodhaa ka taatan hundumaaf,nagayaaf jaalalli, kabjaan oromummaa ka’onnee tiyya irra burqe isin naaf haadhaqqbu.Itti aansuudhaan wanni ani isin hubachiisu barbaadu barreeffamni maqaa kiyyaan jawaar muhammad irratti barrefame akka barreefama kiyya hinta’in akka naaf hubattan galatooma.
Next Soba dhaabni maqaa qabsootiin ilmaan Oromoo biyya alaa keessatti ittiin gudeedaa jiru..
Ati sabboonaa keenya , kan sibeeku sibeeka. Abshir diinaaf bakka hin kenninu !